Noocyada dhir | February 2020
Horumarinta actinidia ee beerta: Talooyin wax ku ool ah ee bilowga ah
Ugu Weyn Ee Noocyada dhir
Noocyada ugu caansan ee asparagus
Noocyada Asparagus waa kala duwan yihiin: dhirta dhirta, xoortay iyo geedaha dhiiqada, lianas. Asparagus ee Giriigga macnaheedu waa "koboc yar". Man wuxuu muddo dheer bartey in uu u adeegsado warshadani faa'iidadiisa. Sawirkii ugu da'da ahaa ee asparagus (3000 BC) waxaa laga helay Masar, iyo qoraaga qadiimiga ah ee Roman-kariska Apitsius ee lagu daaweyn jiray wuxuu ku amaanay tayada dhadhanka ah ee asparagus (magac weyn oo asparagus ah - "asparagus" wuxuu noo yimid Talyaaniga).
Tilmaanta iyo beerista yaanyo "Dhab casaan" dhul furan
Ogolaansho leh dabocase qaraha. Astaamaha iyo talooyinka wax ku oolka ah ee noocyada sii kordhaya
Guryaha dawooyinka ee dhirta yamaaruggu
Xeerarka aasaasiga ah ee geedo sii kordhaya ee basbaas: sida loo rusheeyo abuurka ka hor beerto
Diiwaanka heysta dhalidda - Venyaminovskiy kala duwan
Si ay u guulaysato shimbirta bakhtiga ah, waxay u baahan tahay inay bixiso bandhig, taas oo macnaheedu yahay in boodhku waa inuu noqdo mid sahlan oo aan xor ka aheyn boogaha. Aynu eegno dhowr fursadood oo ku saabsan sida ugu dhakhsaha badan ugaga dhufan karo broiler. Noocyo dhowr ah oo lagu rido shimbir Kaddib marka shimbiruhu koraan, waa waqtigii lagu gowraco. Read More
Nuqul ka mid ah digaagaha waaweyn ee caanaha isku midka ah - Dwarf Brama
Waxyeellada iyo faa'iidooyinka malayga leh malab, sinjiga, liin iyo maaddooyin kale. Maqasyada Tincture
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyada dhir 2020